Ukuhombisa ngamaKristalu-Ungazithenga njani iiKristali zekhaya - Uyilo Lokuphefumlela
Ukuhombisa ngamaKristalu-Ungazithenga njani iiKristali zekhaya
U-Elizabeth Pash, umyili kunye nomnini we I-Elizabeth Pash Interiors kunye neeAntique , Ukwabelana ngento enye ekufuneka uyijongile xa uthenga izinto zakudala. Kule veki, ziikristale zazo zonke iimilo kunye nobukhulu. Siyazi ukuba baninzi okwangoku benza ukuziqhelanisa nentlalontle, kodwa siza kuqhubeka nokupapasha umxholo wokuthenga izinto zeediliya (kunye nemibono ye kwimithombo ye-Intanethi ) ngolindelo lomhla sonke esinokubuyela kwiimarike zethu esizithandayo!
Ndiyakuthanda ukukhangela amaqhekeza e-crystal anomdla ekuhambeni kwam njengoko zizinto ezintle zokuhombisa. Ngaphandle kokuba yodwa kwaye intle, zibonisa intshukumo yangoku eya kuyilo lwendalo noluzinzileyo. Kodwa, ngelixa iikristali zinokuba njalo ukuba nomzuzu onzulu ngoku, bakude nomkhwa omtsha: Bebekhona kangangeenkulungwane-kwaye baya kuhlala ubomi babo bonke.
eyakhelwe kwimivalo izimvo
Abantu baye banomdla ngamakristali amawaka eminyaka, nokuba kungenxa yokunyanga, uphawu lwenkolo, okanye ubuhle babo bendalo. Ingxelo yokuqala yembali yamakristali yayingamaSumeriya amandulo. AmaSumeri asebenzise amakristali kwizacholo, awayezinxiba ukuzikhusela kunye neenjongo zempilo.
AmaGrike amandulo ayesebenzisa iikristali kwiinjongo zempilo kunye nokuba sempilweni- uninzi lwamagama esiwasebenzisa ngekristali namhlanje anemvelaphi yamaGrike. Umzekelo, igama iamethiste lithetha 'ukunganxili' ngesiGrike kwaye libonisa ukusetyenziswa kwelitye njengekhubalo ekukholelwa ukuba lithintela ukunxila kunye neentsengesi! E-China nase Mzantsi Melika, i-jade yaqatshelwa njengelitye elixabisekileyo elaphilisa izintso zomntu. Amakristali abaluleke kakhulu kubantu abaninzi nakwiinkcubeko kwihlabathi liphela kangangokuba ayimangalisi into yokuba la matye mahle angabaziyo kwimizi yokuhombisa. Kwaye ukuba ngenene yenza uneempawu zokuphilisa, ewe, kungcono kakhulu!
Ngaphandle kweempawu zabo zokuphilisa ngamarhe, abantu abaninzi bakholelwa ukuba iikristali zikhuthaza uxolo kunye nemvisiswano kwaye zizisa abantu amandla. Kuba ikhaya lakho kufuneka libe yindawo yoxolo kunye nentuthuzelo, loluphi ulongezo olungcono kunekristale entle yokuphucula amandla, ukuvumelana kunye nokulinganisela ebomini bakho? Kwaye ngaba likho ixesha apho siye sazidinga ezi mpawu?
Olunye lweempawu ezibalaseleyo zeekristali yindlela yokubamba ukukhanya. Kuba akukho ziikristale zimbini ziyafana, nganye nganye inegalelo kwigumbi, ihlala itshintsha ithoni okanye umbala ekuhambeni kwemini njengoko ilanga lihamba esibhakabhakeni. Ukukhanya kwekristale kongeza ubuhle obunobuqili nakweliphi na igumbi, ngokwesiko okanye langoku, kwaye ngenxa yokuba zihlala zincinci kwaye zingabonakali, iikristali zinokulingana naphina! Banokuxhasa elona qhekeza lininzi le-antique okanye eyona tafile intle.
Enye yeekristal ezaziwa kakhulu yi-amethyst, enokufumaneka kwimibala eyahlukeneyo ye-violet:
Abalingisi be brady bunch
I-Amethyst yamkelwe ngombala we-violet yayo.
I-Quartz icekeceke ngakumbi, kodwa yonke into iyabetha. Ndiyakuthanda ukubeka i-quartz crystal kwisiqwenga esihle sefenitshala ye-antique-umahluko womthi omnyama kunye nekristal ekhanyayo iphantsi!
I-Celestite iluhlaza okwesibhakabhaka ngakumbi kwithoni, kwaye iya kubonakala ilungele ikhaya elunxwemeni:
I-Celestite ine-hue eluhlaza okwesibhakabhaka.
Ikristale encinci eyaziwayo yiResert Rose, efumaneka kwiindawo ezomileyo, ezomileyo, ezinje nge-ntshona ye-United States kunye ne-Arabia Peninsula. Igama lalo livela kumaqela akhiwe kwezi kristali afana neentyatyambo zeentyatyambo. Amasuntswana esanti afaka iikristali anika ezi ziqwenga ubume obuhle. Indlela entle yokuzisa indalo kunye nangaphandle ngaphakathi!
Nokuba uyakholelwa ekuphilisweni okanye kwipropathi yenkolo yekristale okanye akunjalo, inye into esinokuvumelana ngayo kukuba lulongezo oluhle lwalo naliphi na ikhaya.
igumbi lobugcisa nezobugcisa
U-annie wokuyila abafazi